What Is Digital Forensics ? Part (43) Vmware Forensics
What Is Digital Forensics ? Part (43) Vmware Forensics လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Operation System ပေါ်မှာပဲ အခြားသော Operation System ကို အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့်သုံးခြင်တယ်ဆိုရင် Virtual System တစ်ခုကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ Virtual System တွေကတော့ Virtual Box VMware Window Virtual PC Hyper -V Oracle VM Parallels Docker တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှာမှ Vmware Forensic အကြောင်းကို ရေးသားသွားပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် VMware forensics အကြောင်းသိရင် Esxi, Vspher ,Vcenter Forensics အကြောင်းကိုပါ ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်အောင်လို့ပါ။ Esxi, Vspher ,Vcenter Forensics အကြောင်းကတော့ တော်တော်လေး ရေးယူရမဲ့ အပြင် လက်တွေ့ပြနိုင်မှ ပိုအဆင်ပြေမှာမို့လို့ပါ။ Vmware မှာပါတဲ့ file system တွေကတော့ vmem – Virtual machine memory file vmdk – Virtual machine storage disk file vmss – Virtual machine information file log – Virtual machine log file nvram – Keeps VM’s BIOS information vmsn – Virtual machine snapshot file vmxf – Additional configuration file. .Vmdk .Vmdk ကတော့ VMware Forensics မှာ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
What Is Digital Forensics ? Part (42) Raspberry Pi Forensics
Raspberry Pi ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဘာလုပ်လို့ရလဲ ဆိုတာ IT EC ပိုင်းကလူတွေ သိပြီးသားပါ။ ARM-Based RISC OS Plan9FreeBSD Chromium OS Windows 10 IoT AmigaOS IchigoJam BASIC Kali * စတဲ့ OS တွေ တင်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Raspberry Pi3Model B အထိရောက်လာပါပြီး အရင် Model တွေမှာ မပါတဲ့ WiFI Blue tooth စနစ်တွေပါဝင်လာပါတယ်။ ပိုပြီး portable ဖြစ်လာပါတယ်​.​​​​အဲ့တော့ Pentest အတွက်လဲ အသုံး ချနိုင်သလို Remote အနေအထားနဲ့ရော , WiFI Base အနေအထားနဲ့လဲ အသုံးချလာနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဖြစ်မလာပေမဲ့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ချေတွေ အတွက်ပါ။ Raspberry Pi မှာ OS loading အတွက်ရော Storage အတွက်ရော USB, SD card Class 10 ကိုတော်တေ်ာများများအသုံးပြုကြပါတယ်။ အချို့ သော Raspberry Pi တွေမှာ​တော့ memory အတွက် Chip ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ OS တော်တော်များများကတော့ linux Base ဖြစ်တဲ့ အတွက် File System ကတော့ Ext4 ဖြစ်ပါတယ်။ How To Forensics ဘယ်အချိန် ​​ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ အသုံးချတာလဲ (When where and How) ဘာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲ ( How to Connect With ) ချိတ်​ဆက်​ထားတဲ့အတွက်​ ဖြစ
Digital Forensics Part (41) CCTV and DVR Forensics Part (2)
First Responder အပိုင်း Chain of Custody အပိုင်းတွေက ဖော်ပြပြီးဖြစ်လို့ သီးသန့်မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ Lab ကိုရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ CCTV Record ဟာ DVR သို့မဟုတ် DVD ,Stick အစရှိသည်ဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ DVR ဒါမှမဟုတ် မူရင်း Storage media ကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။ တစ်ဆင့်ခံအနေအထားနဲ့ ရောက်ရှိလာရင် Resolution အနေအထား Evidence ကောက်ချက်ဆွဲမှုတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ DVR, NVR အတိုင်းရောက်ရှိလာတာလား (DVR အခြေအနေ) (အမျိုးအစား) Storage ပဲရောက်ရှိလာတာလား ( Storage Size) Storage အတိုင်းဆိုရင် DVR ရဲ့ setting ကဘယ်လိုမျိုးလဲ (DVR ဒါမှမဟုတ် Storage media fill ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေလဲသိထားရပါမယ်) အစရှိသည်ဖြင့် စစ်ဆေးရပါမယ် ... ကျန်စစ်ဆေးရမဲ့ အပိုင်းတွေကတော့ စာရှည်နေမှာမို့ မရေးတော့ပါဘူး။ အချို့သော လူတွေကတော့ record မပေးချင်တဲ့ အတွက်ရော မပေါ်ချင်တာရောနဲံ အမျိုးမျိုး လိမ်လည်နိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ နည်းပညာအရ စစ်ဆေးနိုင်သော နည်းလမ်း များစွာရှိပါတယ်။ :) Storage အပိုင်း Fill ဆိုရင်တော့ မှုခင်းအလိုက် Concept နဲ့ အတူ Hard Disk Reco
Digital Forensics Part (40) CCTV and DVR Forensics
CCTV and DVR Forensics မှာတော့ investigator က စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အတုိုင်းအတာမရှိပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက CCTV တပ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေကလည်း ဘက်ဂျက်အတိုင်းအတာနဲ့ ရွေးချယ်ပြီးတပ်ဆင်တဲ့အပြင် CCTV ကိုတပ်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေရဲ့ Setting လုပ်သွားတဲ့အပေါ်လဲမူတည်ပါတယ် ဥပမာ Video File encoding , Hard Disk Wipe Time ။နောက်ပြီး Cable တွေအကွာအဝေး Storage Error Power Source တွေနဲ့လဲ သတ်ဆိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ Suspect က ဒီလမ်းအတိုင်းသွားတယ် ... အခုရနေတဲ့ Record က မကြည်လင်ဘူး မပြတ်သားဘူးဆိုရင် ကြည်လင်ပြတ်သားအောင် တစ်ခြားနည်းလမ်းနဲ့လုပ်ရင်လုပ် မလုပ်ရင် လမ်းတစ်လျှောက်မှ ရှိတဲ့ တစ်ခြား CCTV Record ကိုရယူရုံပဲရှိပါတယ်။ စစ်ဆေးမဲ့သူဟာ CCTV အကြောင်း အနည်းအငယ်တော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ လက်တစ်လောမှာ အသုံးများတဲ့ CCTV အမျိုးအစားတွေကတော့ Dome Camera, Bullet Camera, C-mount Camera Day/Night Camera,PTZ Camera IP Camera , Portable CCTV Camera တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ Camera နဲ့ DVR ကို ချိတ်ဆက်တဲ့ Cable Type Coaxial Cable,Siamese Cable (Include Power cable) Twisted-Pair Cable,Optical Fiber Video Power Cables
What Is Digital Forensics ? Part (43) Vmware Fore...
What Is Digital Forensics ? Part (42) Raspberry P...
Digital Forensics Part (41) CCTV and DVR Forensic...